McGill University - Study in Canada. Tacliinta Sare Abroad
gaabinta : MGU
aasaasay : 1821
Ha iloobin in aad wada hadlaan University McGill
Qor Jaamacadda McGill
Jaamacadda McGill waa mid ka mid ah hay'adaha ugu fiican u yaqaan Canada ee tacliinta sare iyo mid ka mid ah jaamacadaha ugu horeeysa ee dunida. Iyadoo ardayda laga qaar ka mid ah soo socda in McGill 150 dalalka, ardayda waa ugu caalamka kala duwan ee jaamacadda cilmi-degdeg ah ee dalka wax. McGill la aasaasay 1821 in ka tagav saan deeqsi by James McGill mahad, iyo tan iyo markaas, waxaan koray ka college yar oo jaamacad ah cammiran laba xarumood, 10 Caqlina, qaar ka mid ah 300 barnaamijyada waxbarasho, iyo 40,000 ardayda. The University ayaa sidoo kale la wadaajiyo afarta isbitaal cilmiga raacsan si ay u qalin badan 1,000 xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka sannad kasta.
Dhaqanku A of Success
McGill la aqoonsan yahay adduunka oo heer sare ah barnaamijyada waxbarashada iyo cilmi-baarista ay. Ernest Rutherford ee cilmi Nobel Prize-guuleystay on dabiiciga ah ee shucaaca la sameeyay at McGill, qayb ka mid ah dhaqanka dheer oo hal-abuurnimo ku shaqeeya dhismaha in ka mid ah been abuurtay oo ka mid ah Plexiglas celland dhiig aan dabiici ahayn. Maanta Professor noo dhisayaan beerta cusub ee epigenetics, horumarinta ilaha tamarta kale ka dhirta miraha beeraha iyo baabuur-wadidda guul aadanaha duurka kasta bilabo. Our 250,000+ qalin dhiso shabakad caalami ah ballaaran, la Qalinjabiyeyaasha badan oo gaarey sare ee xirfadaha ay sida Garsoorayaasha Maxkamadda Sare, award-winning qorayaasha iyo muusikalayda, cir iyo dheeraad ah.
The Ardayda ifka
Waxa intaa dheer in awood hugaaminaya, McGill loo yaqaan ee ardayda fiican jiidanaya oo ka kala Canada, Maraykanka, iyo adduunka oo dhan. ardayda McGill leeyihiin ugu sareeya ee fasalada galo celcelis ahaan ee Kanada, oo naga go'an in dhiirinta aad u fiican ayaa ka caawiyay ardayda ku guuleysto abaalmarinta heer qaran iyo heer caalami ah celcelis ahaan dhiggooda dheeraad ah jaamacad kale Canadian kasta. The Deeqda Rhodes qiimaha ayaa in a-hoggaamineed quruun 138 ardayda McGill.
Awoodda in ay miisaamaan tacliin heer sare leh ka baxsan waa astaamaha kale ee ardayga talagalaan. Waxa intaa dheer in dhaqan hodan ah ciyaaraha fudud oo ay ku jiraan ciyaartooyda Olambikada badan iyo dhalashada hockey iyo kubada cagta, kumanaan ardayda McGill ka qayb boqolaal kooxood, ururada iyo kooxaha bulshada in loo kobciyo Montreal iyo gacan ka nolol firfircoon campus.
Iyada oo qaar ka mid ah 300 dhismayaasha, 40,000 ardayda, 250,000 Qalinjabiyeyaasha nool, iyo sumcad fiican in gaadho dunida dacaladeeda, McGill ayaa la xardhay ka baxay bar ka mid ah jaamacadaha ugu weyn dunida ee.
Waxaan idiin ku yeedhi xagga sahamiyaan qaar ka mid ah guulaha kuweyn ee McGill oo McGillians. Inkasta oo aynu ku jirno ku faani waxa aan dhammeeyo, our story weli la qoraal ah, iyo cutub cusub waqtiga oo dhan ku daray. Haddii aad ka fikiraya mustaqbalkiisa ah tacliimeed ee McGill, waxaan rajaynaynaa in maalin maalmaha ka mid aad tirin doonaa bog adiga kuu gaar ah oo iyaga ku dhex.
1821 taariikhda aasaasay Jaamacadda McGill
1st ee Kanada ka mid ah jaamacadaha caafimaadka-phD waayo kow iyo toban sannadood oo isku xiga (MacLean ee 2016)
24th adduunka (QS qiimeynta University Adduunka 2015/16)
300+ barnaamijyada waxbarasho
25% ardayda caalamiga ah
23% ardayda ka qalin
ugu sarreeya % ardayda PhD ee jaamacad kasta oo cilmi-Canadian
180 dal oo ay Qalinjabiyeyaasha ku nool iyo shaqada
139 Rhodes Culimada-ugu sareeya ee ka mid ah jaamacadaha dalka Canada
12 Nobel PrizeKooxda ku guuleysatay-ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya Canadian
School of Cuntada iyo Nafaqada ee Human
McGill School of Deegaanka
Cuntada Sayniska iyo Beeraha Chemistry
Dabiiciga Sciences Resource – dhaqaalaha Beeraha
Farm Maareynta iyo Barnaamijka Technology
Kuliyada Barnaamijka Freshman Beeraha iyo Deegaanka Sciences
Shimbiruhu Science Centre oo Dhowrista
Labo gool Centre for Water Resources Management
Xarunta Peoples Indigenous’ Nafaqada iyo Deegaanka
Institute for Global Hubinta Cuntada
Caanaha Information Systems Group
School of Studies Information (SIS)
School of Studies Diinta
Art Taariikhda iyo Studies Isgaarsiinta
Xarunta Luqadda Faransiiska
Luqadda Faransiiska iyo Suugaanta
Taariikhda iyo Qadiimiga ah Studies
Ruush iyo Slavic Studies
Centre for Research Asian Bariga
Indian Ocean Xarunta World
Xarunta Nabadda iyo International Studies Security
Centre for Research on Carruurta iyo Qoysaska
Xarunta Study of Citizenship Democratic
Institute for Gender, Kacsiga iyo Studies Dumarka
Institute for Health iyo Siyaasadda Bulshada
Machadka Daraasaadka Islaamka
Institute for the Study of Horumarinta Caalamiga ah
Xarunta Bulshada, Technology iyo Horumarinta(STANDD)
School of Studies Sii
Education Development Professional Career iyo
Iskaashiga Kulliyadda iyo Studies Summer
Luqadda iyo Isgaarsiinta Intercultural
McGill Community for Waxbarashada Inta la Noolyahay
Translation & Isgaarsiinta Written
Centre for Research on Xanuun
Psychology Waxbarashada iyo La-talinta
Studies Integrated in Education
Kinesiology iyo Waxbarashada Jirdhiska
Xarunta Caalamiga ah ee Dhibaatooyinka khamaarka Youth iyo Habdhaqanada Khatarta Sare
A. S. Wanka Centre Learning
Barnaamijka Tababarka Macallimow Yuhuudda
McGill Qoraalka Centre
shaybaaro Research, kooxaha iyo mashaariicda
Advanced Technologies Waxbarashada ee Settings sax ah (ATLAS)
Gabowga Lab Murqo
Lab Biomechanics: Ice Hockey Research Group (IHRG)
CORE (Laqabsashada iyo Resilience) Kooxda Research
Caafimaadka Dhaqanka iyo Lab Qiiro (HBEL)
Kooxda Research Heath
Awood High iyo Group Research soo baara
Tacliinta Sare Research Group
Hab-McGill Psychotherapy Research Group (MPPRG)
Kooxda Study Youth McGill (MYST)
Laboratory Isku dhex moodala
Physiology Murqaha iyo Lab Biophysics
Biomechanics Shaqada iyo Ergonomics Lab
Resilience, Psychology carruurta, iyo Connections Neurogenetic Lab (The Connections Lab)
Kooxda Research Sladeczek
Sport Lab Research Psychology
Lab Research Development Talwar Child
Graduate iyo Studies Postdoctoral
Barnaamijka Wadajirka ah ee Maareynta & Law (MBA & BCL / LLB)
Barnaamijka Joint in Work Social & Law (MSW & BCL / LLB)
Takhasus Master ee Bioethics
Masters ee Law la takhasus ee Deegaanka
Xarunta Xuquuqda Aadanaha iyo distoor Legal
Centre for Policy Property Garasho
Quebec Research Centre of Law Private iyo barbardhiga
Institute of Air & Law Space
Institute of Law barbardhiga
Institute of Studies Yurub
Desautels Kulliyadda Management
Barnaamijka Summer International
Barnaamijyada Master ee
Masters In Management Warshadaha
McGill Fulinta Institute
Masters International Hoggaanka Caafimaadka (IMHL)
International Masters In baraktis Management (IMPM)
McGill Fulinta Hoggaanka Experience (MY)
Koorsooyinka Online Open u ballaaran (Mooca)
Learning Social Impact for Social
Ganacsiga & Maamulka Xarunta Cilmi
Xarunta Daraasaadka Strategy ee Ururada
Desmarais Global Research Centre Maaliyadda
Dobson Xarunta Daraasaadka ganacsi
Business International Centre Qoysaska
Management Science Centre Research
Marcel Desautels Institute for Management Integrated
McGill Centre for the Iswaafiqida caafimaadka iyo dhaqaalaha
NSERC-ABUURAN Program on Hawlgallada Caafimaadka iyo Management Information
Barnaamijka for tartan caalami ah
School of Sciences Isgaarsiinta & Xanuunada
Habdhiska iyo Cell Biology
Faafa, Biostatistics & Occupational Health
neerfaha & neurosurgery
Farmashiga & Therapeutics
Cilmiga Bulshada of Medicine
Isbitaalka Carruurta ee Montreal
Isbitaalka Guud ee Montreal
Montreal Hospital dareemayaasha
MUHC (Xarunta Caafimaadka ee Jaamacadda McGill)
St. Mary ee Hospital Center
Sir Mortimer B. Davis – Isbitaalka Guud ee Yuhuudda
Xarunta Bone iyo cirridka Research
Centre for Research Nursing
Centre for Research on Language, Mind iyo Maskaxda
Xarunta Study of Resistance martigeliyaha
McGill Centre AIDS
McGill Xarunta Kansarka
McGill Centre for bayoinformatics
McGill Xarunta Daraasaadka ee qaabilsan Waayeelada
McGill Centre for Research Translational ee Kansarka
Hiddawadayaasha CNIB Innovation Centre McGill University oo
Centre for Education Medical
Sii Medical Waxbarashada
Division of Qalliinka wadnaha
Division of maqaarka
Division of General Medicine Gudaha
Division of Qalitaanka Guud
Division of Qalliinka Lafaha
Division of Qalliinka caaga iyo dib
Division of Social iyo Transcultural maskaxda
Division of Research Qalliinka
Barnaamijyada Caafimaadka Global
Barnaamijyada in Dhan Qofka Care
Unit Assessment Technology of MUHC ah
Centre for Research iskujir in Music Media iyo Technology
Dugsiyada iyo wasaaradaha
waaxaha la jaalka
Ayidhi iyo immunology
Farmashiiste iyo Therapeutics
Sustainability, Sayniska iyo Society
Bellairs Machadka Cilmi- (Holetown, Barbados)
Gault Nature Reserve (Gutaa-Saint-Hilaire, QC)
McGill Arctic Research Station (duulaan Fjord, on Central Axel Heiberg Island, MA)
Wilder iyo Helen Penfield Nature Reserve (Lake Memphrémagog, QC)
xarumaha Research, machadyada cilmi, kale
Alan Edwards Centre for Research on Xanuun
Sawirka Cell iyo Network Falanqaynta
Centre for High Energy Physics / UCLA
Xarunta Machines Intelligent
Xarunta Dhismayaasha Chemical Is-isu
Centre for the Physics of Qalabka
Biology Developmental Research Initiative
Global Environmental iyo Cimilada Change Centre (GEC3)
Machadka Xisaabeed Sciences
Laboratory for tijaabooyin Ecology iyo Evolution
Limnology Xarunta Cilmi
McGill Centre for Research on Xanuun
McGill Institute for Qalabka Advanced
Qoryshaynaya Xarunta Cilmi McGill
Xarunta Cilmi Paper saxarka iyo
Quebec Centre for Ilaalinta Noolaha Deegaanka Science
Xarumaha iyo adeegyada
Xarunta Cilmi Baarista Electron Microscopy
Field Sare (800 MHz) NMR Facility
Office for Science iyo Society (US)
Office for Research shahaadada hoose ee Science (annagaa)
Science Layliyo & Field Studies Office
Science Office for shahaadada hoose Student taliyaa (Sousa)
Adeegga Consulting tirokoobka
Tomlinson Project in University-Level Education Science (TPULSE)
Royal Hay'adda u Advancement Waxbarashada (Riyaalka) waxaa la abuuray 1801 under sharciga ah Golaha Sharci-dejinta ee Kanada Hoose – Xeerka ah abuuritaanka Dugsiyada Free iyo Advancement Waxbarashada ee Gobolka this.
In 1816 Riyaalka la oggol yahay in la shaqeeyaan labada Grammar Dugsiyada cusub Royal, in Quebec City iyo Montreal. Tani waxay ahayd hal dhibic ka jeestay waxbarashada dadweynaha ee Kanada Hoose sida dugsiyada la abuuray by sharciga, Sharciga Dugsiyada Dadweynaha ee degmada 1807, kaas oo muujiyey in uu diyaar dawladda ee ay u taageeraan kharashka waxbarashada iyo xitaa mushaar ee schoolmaster a. Tani waxa ay ahayd tallaabo muhim ah in abuurista dugsiyada nondenominational. Marka James McGill ku dhintay 1813 uu dardaaranka waxaa maamula Riyaalka ah.
Asalka laba Dugsiyada Royal Grammar xiran 1846 iyo bartamihii qarnigii 19-ka Riyaalka lunsan oo gacanta kale 82 dugsiyada naxwaha waxaa maamula. Ujeeddada hartay kaliya ahaa si loo maamulo dardaaranka McGill ee ka wakiil ah college gaarka ah. Riyaalka waxay sii wadaan in ay jiraan maanta; waa aqoonsiga shirkadaha in maamula jaamacadaha iyo hay'adaha ay dastuurka kala duwan, oo ay ku jiraan Macdonald College hore (hadda Macdonald Campus), Montreal dareemayaasha Institute iyo Victoria Royal College (kulliyadda dumar hore ee jeestay joogitaanka). Tan iyo Royal Charter ee dib loo eegay ee 1852, The Trustees ee Riyaalka ka kooban yihiin Board of Governors of University McGill.
James McGill, dhashay Glasgow, Scotland on 6 October 1744, ahayd Ingiriisi guul- iyo baayacmushtariga Faransiis ku hadla ee Quebec, isagoo matriculated galay Glasgow University in 1756. Inta u dhaxaysa 1811 iyo 1813, Kor buu u jiideen dardaaran ka tago oo uu “estate Burnside”, 19 hektar (47-acre) mareenka ee dalka miyiga iyo 10,000 pounds in Hay'adda Royal ee Advancement Waxbarashada.
Marka dhimashada McGill ee December 1813, Hay'adda Royal ee Advancement Waxbarashada, asaasay 1801 Xeerka ah Golaha Sharci-dejinta ee Kanada Hoose, ku daray in meello ka mid ah Jaamacadda a iyadoo la raacayo shuruudaha McGill ee doonista in ay shaqo asalka ah ee maamulka waxbarashada hoose ee Kanada Hoose.
Sida xaalad of dardaaranka, Barriga iyo lacagaha lahaa in loo isticmaalo samaynta a “Jaamacadda ama College, u ahayn ujeeddooyinka Waxbarashada iyo Advancement Waxbarashada ee Gobolka ayaa sheegay in.” doonistiisu cayimay in gaar ah a, college dastuurka in loo baahan doono inuu magacayga hor geeyo iyo dugsiga waa in la dhisaa gudahood 10 sano uu dhintay; haddii kale dardaaranka laaban lahaa in dhaxla naagtiisa.
On March 31, 1821, ka dib markii dagaal sharci oo daba dheeraaday qoyska Desrivières ah (dhaxla naagtiisa), McGill College ka King George IV helay charter boqornimo. Jaartarka in College waa in la arko oo loo qaaday sidii University a, iyadoo xoogga darajo kulan.
In kastoo McGill College helay Charter ay Royal ee 1821, waxay ahayd aan firfircooneyn ilaa 1829 marka Medical Montreal ee Hay'adda, taas oo la aasaasay 1823, noqday unit tacliinta college ee hore iyo dugsiga caafimaadka Kanada ee ugu horeysay. The Kuliyada Daawada siiyey ay heerka kowaad, Doctor a of Medicine iyo Qaliinka, in 1833; tani waxay ahayd oo shahaado caafimaad ee ugu horeeya in la abaalmariyey in Canada.
The Kuliyada Daawada hadhay oo kaliya awood hawlaha dugsiga ee ilaa 1843 marka Kuliyada Arts bilaabay cilmiga ee Arts Dhismaha iyo East Wing oo dhawaan la dhisay (Dawson Hall). Jaamacada ayaa sidoo kale taariikh ahaan ayaa xirid xoog leh Grenadier ilaalada Canadian The, guutada a military kuwaas oo James McGill u adeegi jireen sida-Lieutenant Colonel. magacan waxa loo calaamadeeyay dhagax u taagnayd ka hor dhismaha Arts ku dul, ka halkaas oo ilaalada ka qaaday off sanad walba lagu xusayey Maalinta Xuska.
The Kuliyada Sharciga la aasaasay 1848 kaas oo sidoo kale waa ee noociisa ugu da'da weyn dalka. 48 sano ka dib, dugsiga ee naqshadda dhismaha Jaamacadda McGill la aasaasay.
Sir John William Dawson, maamulaha McGill ee ka 1855 si ay u 1893, waxaa inta badan lagu tiriyaa la ekaysiinaya dugsiga galay jaamacad casri ah. Waxa uu shaqaalaysiiyay gargaarka ee muwaadiniinta ugu taajirsan Montreal ee (siddeetan boqolkiiba Xoolo Kanada ayaa waxaa ka dibna gacanta ku qoysaska gudahood Golden Square Milearea in hareereeyeen jaamacadda noolaa), kuwaas oo inta badan ku deeqday hantida iyo maalgelinta loo baahan yahay si ay u dhisaan dhismayaasha campus ah. magacyada ay soo jiidaan badan dhismayaasha caan ah campus ee.
William Spier loogu talagalay dheer ee West Wing ee Dhismaha Arts ee William Molson, 1861. Alexander Francis Dunlop loogu talagalay isbedel weyn ku East Wing ee McGill College (hadda loo yaqaan Dhismaha Arts ah, McGill University) waayo, Prof. Bovey iyo Dept. Science ka, 1888. Tani ballaarinta campus ka sii waday ilaa 1920. Dhismayaasha loogu talagalay byAndrew Taylor, waxaa ka mid ah Museum Redpath ah (1880), Macdonald Physics Building (1893), Library Redpath ah (1893), Chemistry Macdonald ku Building (1896), Engineering Macdonald ku Building (1907)-now yaqaan Library Macdonald-Stewart ku Building, iyo Medical Strathcona ku Building (1907)-Tan iyo baxshay habdhiska Strathcona iyo Ilkaha Building.
In 1900, jaamacadda la aasaasay Library MacLennan ee Socdaalka. McGill University Waltz ka kooban by Frances C. Robinson, waxaa la daabacay ee Montreal by W.H. Scroggie, c 1904.
In 1885, Board ee jaamacadda of Governors si rasmi ah u ansixiyay isticmaalka magaca “McGill University”. In 1905, jaamacadda helay campus labaad markii Sir William C. Macdonald, mid ka mid ah lehna waaweyn ee jaamacadda, cilmi kulliyad in Sainte-Anne-de-Bellevue, 32 Kiiloomitir galbeed ee Montreal. Macdonald College, oo hadda loo yaqaan Campus Macdonald ah, furay ardayda 1907, asal ahaan bixiya barnaamijyada beeraha, sayniska qoyska, iyo waxbaridda.
George Allan Ross loogu talagalay Dhismaha Pathology ah, 1922-23; Machadka dareemayaasha ah, 1933; Machadka dareemayaasha waxaa dheer 1938 Jaamacadda McGill. Julien Jean Perrault (Injineerka) loogu talagalay ee deggenaanshaha McTavish Street for Charles E. Gravel, oo hadda loo yaqaan David Thompson House (1934).
Ma rabtaa wada hadlaan University McGill ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Jaamacadda McGill ee Map
Photos: McGill University rasmiga ah Facebook
dib u eegista University McGill
Ku biir si ay ugala hadlaan of University McGill.